"Ary Jehovah … nanome azy (nanome an’i Joba) indroa toraka izay nananany fahiny… Ary Jehovah nitahy ny niafaran’i Joba mihoatra noho ny voalohany." Joba 42:10,12
"Efa renareo ny faharetan’i Joba, ary efa hitanareo ny faran’ny nataon’ny Tompo taminy, fa miantra indrindra ny Tompo sady be famindrampo." Jakoba 5:11
Ny fiandohan’ny bokin’i Joba dia ahitana an’i Satana eo afovoan’ny anjely izay miseho eo anatrehan’Andriamanitra. Nolazain’i Jehovah taminy ny fitondrantena mendrika halain-tahaka nananan’i Joba. Nilaza i Satana fa matoa i Joba manaja an’Andriamanitra, dia satria manana ny ampy: zanaka, harena, tsy misy izay tsy nananany. Namaly Jehovah: “Indro, eo an-tananao izay ananany rehetra; fa ny tenany ihany no aza aninjiranao ny tananao” (Joba 1:12). Dia nianjady tamin’i Joba ireo zava-doza, ka tao anatin’ny indray andro no namoizany ny zanany folo sy ny fananany rehetra. Nitoetra ho lavorary izy tao anatin’ny fitsapana.
Koa nanambara i Satana fa tsy nihontsona i Joba, satria tsy voakasika ny fahasalamany. Dia namaly Andriamanitra hoe: “Indro, eo an-tananao izy ; ny ainy tokana ihany no aza asiana”. Dia nisy aretina mampijaly mafy namelezan’i Satana an’i Joba (Joba 2:7), hany ka naniry ny ho faty izy.
Ireo toko ao amin’ny Soratra Masina ireo dia mampiseho kely ny tontolo tsy hita maso. Ampahafatarin’ireo fa afaka manatona an’Andriamanitra i Satana, ilay fahavalon’ny olona, indrindra fa ireo mpino. Miezaka hanimba izy, ary manana hery mampatahotra. Aoka anefa homarihina fa:
- Andriamanitra no mitarika ny resaka, fa tsy i Satana.
- Andriamanitra no nanome fahefana an’i Satana, hamelezany an’i Joba, nefa nanisy fetra mazava izay tsy azon’i Satana nihoarana.
- Ny fitsapana an’i Joba dia niafara tamina fitahiana lehibe. Izany no efa noheverin’Andriamanitra hatrany am-boalohany. Koa tsy nahafantatra i Satana fa niasa hahasoa an’i Joba.
Ry zanak’Andriamanitra, tsy misy tokony hatahorantsika. Raintsika Andriamanitra, tia antsika Izy. Tsy afaka manao na inona na inona i Satana, raha tsy nisy fahazoan-dalana taminy, ary hahasoa antsika izany, any am-parany.